Maraykanka oo jaray kalmaadi uu siin jireen Pakistaan – Radio Daljir
Maraykanka oo jaray kalmaadi uu siin jireen Pakistaan
Janaayo 5, 2018 11:41 b 0
Xukuumadda Washington ayaa markale ku celisay in dalka Pakistaan laga jarayo dhammaan kaalmada dhaqaale ee dhanka ammaanka ee uu dalkaasi siinjiray Mareykanka,kadib markii lagu eedeeyey Pakistaan in ay wax ka qabato falalka argagixisada la xiriira.
War ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in ay xayiraaddaasi sii jiri doonto ilaa iyo inta xukuumadda Islamabad ay tallaabo ka qaadeyso kooxaha Haqqani iyo Taalibaanka Afqaanistaan.
Dowladda Mareykanka oo durba bilowday xayiraadda dhaqaalahaasi,waxaana haatan la hakiyay kaalmo milatari oo uu Pakistan siin lahaa oo ka badan 255 milyan oo doolar.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa Shalay oo khamiis ahayd waxa ay dalka Pakistan ku dartay liis waddamo khaas ah oo ay eegeyso, kuwaasi oo ay ku eedeysay in ay si xun ugu xad-gudbayaan xorriyaddaqowlka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Kal hore Pakisttan ku eedeeyay in ay khiyaaneyso dalkiisa ilsa markaana ay ka qaadaneyso balaayiin doolar oo kaalma ah,iyadoo Pakistaana ay arrintaasi beenisay.
Rabshado ka socda dalka Itoobiya iyo Madaxda Dalkaas oo ka hadashay